I-Semalt ichaza iziphi izixhobo I-Image Effra Scraper ifanele ibe nayo
Kwakukho amaxesha apho umfanekiso ufanelekile ngamawaka amashumi, kodwa ngoku imifanekiso ifanelekile amathandathu amathandayo, iifayile, izithupha kunye nezabelo. Ngaphezu kwalokhu, iifoto zityhulwa, zabiwe, zaphinda zaphinda zaphinda zatshintshwe kwaye zilungiswe ukuchuma kwezoshishino. Ngokuqhelekileyo abantu bayayifaka imifanekiso ngaphandle kwemvume kwaye banenjongo yokwandisa inethiwekhi yabo yonke ihlabathi. Imifanekiso yokukrafa yenye yezona zihloko ezingakuhoxiswa kule mihla, kodwa ukuba nekhono phantsi kwebhanti yakho yesikhali kuya kukunika iintlobo ezahlukeneyo. Kubalulekile ukukhetha uhlobo olulungileyo lomfanekiso onokuthi uncede ukukhulisa ishishini lakho kunye nokuphucula ukusebenza kwewebhu. Apha sixoxile ngezinye iinkcukacha umfanekiso omnene kufuneka ube nawo:
Ukudala kwe-Agent-click-Click Agent Creation:
Umfanekiso weskrini unceda ukutshekisha imifanekiso yeGoogle neBing. Kwakhona, kunokudala kalula ii-agent zangaphandle kunye nokwenza i-browsing experience yakho ibe ngaphezu kokumangalisayo. Ukongezelela, umfanekiso wesicaciso awudingi ukuba ube neenkqubo okanye iinkcukacha zokubhala.
UkuTyikitya kokuBoniswa koBoniso:
Ngomfanekiso oqingqiweyo, unokukhipha umxholo ochanekileyo kwaye ujolise inani elikhulu lamakhasi ewebhu lula. Kwakhona, kunceda ukunciphisa iimfuno zokusebenza eziphantsi kunye nokufumana imifanekiso ephezulu ephezulu kwimiba yemizuzu.
Iidrafti eziqhelekileyo kunye needatha zedatha ayibhalisi ukuziphatha kwabasebenzisi. Kodwa umzobo wesimboli unokurekhoda ukuziphatha komsebenzisi kwinqanaba kwaye kukunceda uhambe ngephepha lewebhu.
Ubugcisa beeNkcazelo zoMatshini:
Kukho ezimbalwa ukukhwa kwewebhu kunye nezixhobo zokumbiwa kwedatha ezinomthamo wobugcisa bokufunda. Umtshini wesithunzi unayo le teknoloji kwaye uyayiqonda kalula imifanekiso yakho kunye neetekisi zabo. Iyanciphisa iindleko zokugcina nge-70% kwaye ifumana idatha efunwayo kwiifoto ezijoliswe kuyo.
Ukungena ngemvume ngokuzenzekelayo:
Umfanekiso we-image scraper yenza kube lula ukuba ufikelele kwi-web content kwaye ujolise inani elikhulu lamasayithi. Ngaphezulu, awudingi naziphi na iinkcukacha zokufumana umxholo okhuselekile ukusuka kwisayithi. Kunoko, unako ukufikelela kunye nokukhipha iwebhusayithi epheleleyo kubandakanywa itekisi kunye nemifanekiso enomfanekiso okhulayo, ngaphandle kwesidingo sokungena ngemvume.
I-Intelligent Navigation Site:
Esi sixhobo sinokukhangela imifanekiso kunye namavidiyo kuwe kodwa isindisa ixesha lakho kwaye lenze imisebenzi yalo ngokulula. Ngamafutshane, ungaqiniseka ukuba uza kufumana imifanekiso ephezulu kwaye ufumane idatha echanekileyo ukusuka kumaphepha amaninzi ewebhu njengoko ufuna.
Ngomfanekiso oqhekezayo, unokwenza umxholo wewebhu, umxholo wesiseko kunye neetekisi ezivela kwinani elikhulu leendawo. Kuya kutshintsha ngokukhawuleza amabali kunye nemifanekiso yabo kwaye ziphinde zibhale izihloko zazo.
Ukuba unethamsanqa, uya kukwazi ukufumana imifanekiso engenamalungelo e-copyright kwi-Google, Bing, Yahoo okanye ezinye iinkcukacha ze-intanethi.Inxalenye ebalulekileyo kukuba unokwenza imifanekiso oyifunayo ngaphandle kokuyekezela kumgangatho. Kunzima kakhulu ukufumana iifasethi ezithobela zonke iimfuno zethu. Ngombulelo, umfanekiso wesicatshulwa wenza umsebenzi wakho ube lula kwaye kukukhethwa kuqala kwamashishini kunye nemveliso ephezulu. Ukuba uhlonipha imithetho ye-copyright, uza kukhangela ngaphandle komfanekiso ithuluzi lokuqhawula kwaye wenze ukhokelo oluninzi kumnatha Source .